IsiBrithani, isiFrentshi, isiDatshi nesiPutukezi
Amagunya amaninzi ahlukeneyo aseNtshona Koloni aseNtshona Koloni akha ama-coloni e-Asia ngelikhulu leshumi elinesibhozo neshumi elinesithoba. Ngamanye amagunya omkhosi ayenendlela yokuphatha, kwaye izikhulu zamakholoni ezivela kwiintlanga ezahlukahlukeneyo nazo zibonisa izimo zengqondo ezahlukeneyo kwizifundo zabo zobukhosi.
UBukumkani baseBrithani beyona enkulu kunazo zonke kwihlabathi ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi II, kunye neendawo ezininzi e-Asia.
Ezi ndawo ziquka oko ngoku u-Oman, Yemen , i-United Arab Emirates, i-Kuwait, iIraq , iJordan , iPalestine, iMyanmar (i-Burma), iSri Lanka (Ceylon), iMaldives , iSingapore , iMalaysia (Malaya), iBrunei , iSarawak kunye ne-North Borneo (ngoku yingxenye ye- Indonesia ), iPapua New Guinea kunye neHong Kong . Isithsaba sesithsaba sezinto zonke zaseBrithani ezingaphandle kwehlabathi, ewe, kwakuyiNdiya.
Amagosa aseburhulumenteni aseBrithani kunye nabakoloni baseBrithani ngokubanzi babonwa njengemizekelo "yokudlala ngokufanelekileyo," kwaye kwinqanaba, ubuncinane, zonke izifundo zesithsaba kwakufanele zilingane phambi komthetho, kungakhathaliseki ukuba uhlanga lwabo, unqulo okanye ubuhlanga. Nangona kunjalo, iikholoni zaseBrithani zazingqinela kubantu bendawo abangaphezu kwamanye amazwe aseYurophu, ukuqesha abahlali njengeluncedo lwasemakhaya, kodwa abaqhelana nabo ngokukhawuleza. Ngokwengxenye, oku kungenzeka ngenxa yokudluliswa kweengcamango zaseBrithani malunga nokuhlukana kweeklasi kwiikoloni zabo zaphesheya.
AbaseBrithani bathatha umxholo wezinto zabo zobukhosi, bevalelwa ngumsebenzi - "umthwalo womntu omhlophe," njengoRudyard Kipling wakubeka - ukuguqula nokuhlaziya abantu baseAsia, Afrika kunye nehlabathi elitsha. E-Asia, ibali lihamba, iBrithani yakha imigwaqo, izitimela kunye noorhulumente, kwaye yafumana ukukhathazeka kwelizwe kunye neyeyi.
Lo mthombo wobumnene kunye noluntu ngokukhawuleza unqabile, nangona kunjalo, ukuba abantu abaxoshiwe baphakama. IBrithani yahlukumeza ngenyameko i- Indian Revolt ka-1857 , kwaye yahlukumeza ngothathi-nxaxheba abathathi-nxaxheba be- Mau Mau Rebellion yaseKenya (1952 - 1960). Xa indlala yahlasela uBengal ngo-1943, uRhulumente waseWinston Churchill akazange akwenze nto kuphela ukunyusa iBengalis, ngokuqinisekileyo yabeka ukuxhaswa kokutya e-US naseCanada efuna iNdiya.
Nangona iFransi yayifuna ubukhosi bobukhosi baseAsia, ukunqotshwa kwayo kwiimfazwe zeNapoleonic kwashiya ngamahlathi amaninzi aseAsia. Ezi ziquka i-mandate ye-20 leminyaka yeLebhanon neSiriya , kwaye ngakumbi ngakumbi i-coloni ye- Indochina yesiFrentshi- ngoku iVietnam, iLosos neCambodia.
Iingcamango zesiFrentshi malunga neenkoloni zezifundo, ngezinye iindlela, zahluke kakhulu kwezo zithandani zaseBrithani. Ezinye iFrench zesiFulentshi azifunanga nje ukulawula ii-colonial holdings, kodwa ukudala "iFransi eFransi" apho zonke izifundo zaseFransi emhlabeni jikelele ziya kuba zilinganayo. Ngokomzekelo, ikholoni yaseNorth Afrika yaseAlgeria yaba yintsipho, okanye iphondo, eFransi, izaliswe ngokumelwa kwepalamente. Lo mahluko kwisimo sengqondo singabangelwa yiFrance yokuqwalasela ukukhanya, kunye neNguqulelo yesiFrentshi, eyayidilizile ezinye zezithintelo zeklasi ezisalela uluntu eBrithani.
Nangona kunjalo, iikholoni zaseFransi nazo zaziva 'ngumthwalo womntu omhlophe' wokuzisa oko kuthiwa yimpucuko kunye nobuKristu kwizizwe ezixhasayo.
Kwinqanaba lomntu, ama-colonial aseFransi ayengaphezulu kuneBrithani ukutshata nabasetyhini bendawo kunye nokudala i-fusion yenkcubeko kwimibutho yabo yeenkoloni. Ezinye i-theorists zobuhlanga ezifana ne-Gustave Le Bon kunye no-Arthur Gobineau, ke ke, zityhawula lo mkhuba njengenkohlakalo yenkohlakalo yamaFrentshi. Njengoko ixesha liqhubeka, uxinzelelo lwentlalo luye lwanyuka kuma-colonial aseFrentshi ukulondoloza "ubunyulu" be "intambo yaseFransi."
NgesiFrentshi i-Indochina, ngokungafani ne-Algeria, abalawuli bama-colonial abazange bamise iindawo zokuhlala ezinkulu. I-Indochina yesiFrentshi yayingumbutho wezoqoqosho, okwenzelwe ukuvelisa inzuzo kwilizwe lasekhaya. Nangona kunqongophala kwabasemzini ukukhusela, nangona kunjalo, iFransi yayiphumelele ukungena kwimfazwe enegazi kunye neVietnam xa ilwa nombuyiselo waseFransi emva kweMfazwe Yehlabathi II .
Namhlanje, iindawo ezincinci zamaKatolika, ukuthanda izinto zokuhlala kunye nama-croissants, kunye nolunye udidi lwezobukoloni oluhle luhlala kuyo yonke impembelelo ebonakalayo yaseFransi kwi-Asia-mpuma ye-Asia.
AmaDutch akhuphisana kwaye alwela ukulawulwa kweendlela zorhwebo zase - Indian Ocean kunye nemveliso yesipilisi kunye neBrithani, ngokusebenzisa iinkampani zabo zaseMpumalanga India. Ekugqibeleni, iNetherlands yalahlekelwa yiSri Lanka eBritish, kwaye ngowe-1662, yalahleka iTaiwan (Formosa) kwisiTshayina, kodwa yagcinwa ukulawula ubuninzi beziqithi ezizizityebi eziye zenza i-Indonesia.
Kuba amaDatshi, eli shishini lenkoloni lalingamalunga nemali. Kwakungekho ncinci kakhulu ukuphuculwa kweenkcubeko okanye ukuguqulwa kwamahedeni - amaDatshi ayefuna inzuzo, elula kwaye elula. Ngenxa yoko, babengabonakali nantoni ngeendawo ezingenangqumbo zokuthabatha abemi kwaye basebenzise njengezigqila kwizityalo, okanye bafeze bonke abantu baseBanda Islands ukukhusela ukuxhomekeka kwabo kwintengiso kunye ne-mace .
Emva kokuba iVasco da Gama ijikeleze umda osezantsi we-Afrika ngo-1497, iPortugal yaba yimbutho yokuqala yaseYurophu yokufumana ukufikelela kolwandle e-Asia. Nangona amaPhuthukezi ayakhawuleza ahlolisise aze afake amabango amanxweme ahlukeneyo eNdiya, eIndonesia, e-mpuma ye-Asia kunye neChina, amandla alo aphelile kwii-17 neye-18, kwaye amaBrithani, amaDutch namaFrentshi akwazi ukugxotha iPortugal ngaphandle amaninzi amaninzi aseAsia. Ngekhulu lama-20, yintoni eyasala i-Goa, ngaselunxwemeni olusentshonalanga yeNdiya; East Timor ; kunye nesango laseKinshasa eliseningizimu eMacau.
Nangona iPortugal ayingeyona yongongoma yamandla aseMerika, yayinamandla amakhulu kakhulu okuhlala. I-Goa yahlala isiPutukezi kwaze kwaba yilapho i-India ixhasayo ngo-1961; I-Macau yayiPutukezi kwaze kwaba ngo-1999, xa amaYurophu ekugqibeleni ayiphindisela eChina; kunye ne-East Timor okanye iTimor-Leste ngokuzimeleyo zaba zimeleyo kuphela ngo-2002.
Ulawulo lwesiPutukezi e-Asia lwaluguqukela (njengokuba baqala ukuthatha abantwana baseTshayina ukuba bathengise ebukhosini ePortugal), i-lackadaisical, kunye ne-fund. NjengamaFrentshi, abakoloni basePortugal abachaswanga ukudibanisa nabantu basekuhlaleni nokudala abantu base-creole. Mhlawumbi uphawu olubaluleke kakhulu lwengqondo yesiPutukezi, nangona kunjalo, yayinenkani nenqaba yokurhoxisa, nangemva kokuba eminye imibuso yobukhosi ivalwe ivenkile.
Impiriyali yamaPutukezi yayiqhutywa ngumnqweno onyanisekileyo wokusasaza amaKatolika kunye nokwenza iitoni zemali. Kwakhona kwaphefumlelwe ubuzwe; ekuqaleni, umnqweno wokubonakalisa amandla ezwe njengoko waphuma phantsi kolawulo lwamaMoor, nakwiiminyaka ezidlulileyo, ukuzingca ngokuzimela ekubambelele kwiikoloni njengomqondiso wenkcubeko yangaphambili yobukhosi.
Inkcazo kaHabeas Corpus
Amazwe kunye nokwamkelwa kwabo kwiManyano
I-Pangea Hypothesis ka-Alfred Wegener
Ukufumana i-PHP yoMqulu woMqulu
I-Top 10 Covers yeBol Marley Iingoma
Uqoqo lweeNtlu zeeNkalo zoVavanyo kunye neMpahla
Isigaba sokuqala seKharityhulam kwiiKlasi ze-ESL
Izigqibo zoNyaka omtsha zoTitshala
Ngaba Unokuba ... I-Ice Breaker Game yabantu abadala - Uluhlu lweengcinga Nombolo 1
Indlela yokufundisa i-Multisensory to Reading
Quotes yamalungelo ezilwanyana
Amanqamlezo aseBonampak, eCapap Mexico